Akanakisa LCD Screens eArduino | Mahara emahara
Mapurojekiti ane hukama neArduino anozivikanwa kwazvo uye, sezvakaitika neRaspberry Pi, ndeimwe yemapurojekiti eFree Hardware pakati pemakambani. Ndosaka tichazotaura nezvazvo imwe yemasanganiswa anozivikanwa pakati pevashandisi veArduino: LCD + Arduino.
Iyo LCD inoratidzira iri inowedzera mari uye inowanika chishongedzo, izvo zvinoita kuti ive huru sarudzo yekuperekedza yedu Arduino bhodhi. Asi Ko LCD skrini ingashandiswa needu Arduino bhodhi? Ndeapi mapurojekiti anogona kushandiswa neLCD neArduino, musanganiswa uyu unofanirwa kushandisa?
1 Chii chinonzi LCD?
2 Ndeapi marudzi eLCD skrini aripo?
3 Ndeapi mamodheru anonyanya kufarirwa?
4 Nzira yekubatanidza sei LCD skrini kune Arduino?
5 Zvinokurudzirwa here kushandisa LCD skrini yeprojekiti yedu?
Chii chinonzi LCD?
Vashandisi veNovice havazive izvo zvinomirirwa neLCD, kunyangwe zvavo vachinge vazviona kanopfuura kamwe muhupenyu hwavo. LCD inomiririra Liquid Crystal Ratidza, kana chii chinosvika pakuva Liquid Crystal Ratidza. Chidzitiro chidiki kana chihombe icho vazhinji vedu takaziva mune akasiyana madhivhisi senge wachi dzewachi, mawachi skrini, macalculator, nezvimwe ... Zvigadzirwa zvemagetsi zvisingaperi izvo zvakawedzerwa nekuda kwekubatanidzwa kweLCD + Arduino uye Mahara Hardware.
LCD skrini inoenderana nechero Mahara Hardware, kusanganisira Arduino Project mabhodhi, kunyangwe ivo vachida kuti iwo mabhodhi ave nezvimwe zvinongedzo kana mapini ekugadzira kubatana pakati pemagetsi bhodhi uye iyo LCD skrini.
A priori, hapana chinotadzisa kushandisa akasiyana LCD screen saizi. Mune mamwe mazwi, iyo Arduino bhodhi inogona kushandisa 5-inch, 20 "LCD skrini kana 5 × 2 saizi saizi, kutaura nezve diki saizi. Asi isu tinofanira kuziva izvozvo Arduino bhodhi haina kufanana nekadhi kadhi kana mamaboardboard, saka meseji inofanirwa kuratidzwa pachiratidziri haishande zvakafanana pachiratidziri chidiki senge pahwindo hombe, chero bedzi iri rimwe bhodhi reArduino.
Iwo mapini atichada pane Arduino bhodhi kuti ubatanidze kune LCD skrini ichave inotevera:
GND uye VCC
Pini D0 kusvika D7
Pini mbiri dzeKudzokera kumashure
Kana iwe uine mapini akakwana nembambo zvinoenderana nezviri pamusoro, LCD skrini ichashanda zvakakwana neArduino board. Saka zvinogara zvichikurudzirwa kutarisa pini dzeese madhizaini kuti uve nechokwadi chekuti kubatana kuripo. Chero zvazvingaitika, kashoma kune iyo Arduino bhodhi iyo isingakwanise kubatanidzwa neiyo LCD kuratidza uye kana ikave nemamiriro akadaro, kune akasiyana lcd module pamusika ayo ari nyore kubatana neArduino uye ane mutengo unodhura kwazvo.
Ndeapi marudzi eLCD skrini aripo?
Isu parizvino tinowana matatu marudzi eLcd skrini pamusika:
El Mutsara LCD rudzi rwechidzitiro chinoratidza ruzivo kuburikidza nemitsetse. Ruzivo rwunoiswa mumitsetse uye hatigone kubuda mufuremu iyoyo. Mhando iyi yeLCD ndiyo yakanyanya kushandiswa, ine mari uye inozivikanwa asi irwo rudzi rweLCD inopa mutambo mudiki, kubvira iyo inongoratidza chete rumwe ruzivo uye kazhinji ingori zvinyorwa.
El lcd Inoshanda zvakada kufanana neiyo yapfuura mhando yecd, asi kusiyana neiyo yapfuura, in iyo lcd nemapoinzi isu tine matrix emapoinzi. Nekudaro, mune iyi mhando yecdc tinogona kuisa zvinyorwa uye kunyangwe mifananidzo chero papi paiyo LCD skrini. Chii chimwe tinogona kuva nemazana emafaira mukati meiyo imwechete LCD skrini, chimwe chinhu chisingaitike mune LCD kuratidzwa kwemitsara, iyo saizi inofanirwa kugara yakafanana.
El OLED kuratidza Izvo ndezve vazhinji rudzi rwekuratidzwa kwavo pachavo kune vamwe zviri mukati memhando dzeLCD. Iyo OLED Ratidza ndeye skrini inotiratidza ruzivo asi kuvakwa kwayo kwakasiyana neiyo yeiyo LCD skrini kubvira inoshandisa diode inotungamirwa ine zvikamu zvehupenyu pakusikwa kwayo. Kusiyana nemhando dzapfuura, maOLED anotaridza anopa resolution yepamusoro, ruvara uye kushandisa simba kwakaderera. Kunge macomputer monitors kana dot lcd, maOLED skrini anoshandisa matrix emadhiza kana mapikisheni (sezvo tichigona kushandisa akati wandei pachiratidziro chimwechete) kuratidza zvirimo.
El LED kana LCD Led kuratidza yakafanana neOLED Display, asi diode rinotungamirwa harina zvinhu zve organic. Kuita kwayo hakuna kukwirira sekuratidzwa kweOLED asi inopa resolution yakawanda kupfuura iyo dot LCD skrini uye inopa ruvara.
El TFT kuratidza ndiyo yazvino mhando yeiyo LCD pamusika. Tinogona kutaura kuti iyo TFT inoratidzira inoshandisa mapikisheni senge macomputer monitors kana materevhizheni uye kuti tinogona kuburitsa chero mhando yeruzivo kuburikidza neaya ma skrini. Simba rayo rekushandisa rakakwira kupfuura chero ripi zvaro rekare mhando saka zvidiki zvidiki zvinoshandiswa. Saizi yezviratidziro izvi zvinoyerwa nemasendimita zvakasiyana nemamwe marudzi ekuratidzira. Izvo zvinoyerwa nemavara kana neupamhi hwechidzitiro
Ndeapi mamodheru anonyanya kufarirwa?
Nekuda kwekutengeserana kwepamhepo tinogona kuwana mhando dzisingaverengeke dzeLCD kuratidza, asi mashoma chete ndiwo anozivikanwa. Uku kufarirwa kunokonzerwa nekutora kwayo nyore, mutengo wayo, mashandiro ayo kana kungori mhando yayo.. Pano tinotaura nezve aya mamodheru:
Uku kuratidzwa kunouya kubva kune zvekare Nokia 5110 nhare mbozha. Iyo LCD yemashure aya yakakunda nharembozha uye kambani yakaramba ichitengesa ichi chiratidziro kuti ishandise pachayo. Iyo skrini ndeye monochrome uye iri Lineas LCD mhando. Iyo Nokia 5110 inoratidzira inopa 48 mitsara uye makumi matanhatu neshanu. Simba rayo rakadaro zvekuti rinopa mukana wekuratidzira mifananidzo kunyangwe zvisingaite. Kuita kwayo kwakanaka kwazvo kunyangwe isu tichafanira kushandisa backlighting kuti tikwanise kunyatso kuona iyo skrini, kazhinji inowanzo kuperekedzwa nekuvhenekerwa uku kunyangwe paine mamodule asina basa iri. Iyo inoratidzira inoshandisa Philips PCD8544 mutyairi. Iyo Nokia 5110 LCD skrini inogona kuwanikwa pa zvitoro zve1,8 euros.
The module Hitachi HD44780 LCD Iyo module inogadzirwa nemugadziri Hitachi. Iyo lcd pani ndeye monochrome uye iri mutsara mhando. Tinogona kuwana modhi ine mitsara miviri ye2 mavara mumwe nemumwe uye imwe modhi ine mitsara mina yemavara makumi maviri neimwe. Isu tinowanzo tsvaga iyo Hitachi HD44780 LCD inoratidzira mune chero chitoro asi zvinogona zvakare kuti isu tinongowana iye Hitachi HD44780 controller isina skrini, mutengo unogona kutibatsira mune ino mamiriro, mutengo uri screen pamwe mutongi we1,70 euros uye chete 0,6 euro controller.
Iyi LCD inoratidza iri OLED mhando. I2C OLED LCD i-inch-inch size monochrome OLED skrini inobatana neArduino kuburikidza neI2C protocol, iyi protocol inoshandisa bhizimusi rekudaira rinotibvumidza kusevha mapini, kuve zvichidiwa mapini mana pamberi peanodiwa akambotaurwa. Mutyairi weiyi LCD skrini ndeye generic saka tinokwanisa kushandisa maharaibhurari ekushandisa kwayo. Mutengo weiyi modhi hausi wakachipa semamodheru apfuura asi kana ichikwanisika nevazhinji vashandisi, tinogona tsvaga kwema10 euros iyo unit.
Iyo E-Ink LCD skrini inoshandisa emagetsi inki kuratidza ruzivo. Kunge mamwe ese mamodheru, inoshandisa iyo I2C protocol kutaurirana naArduino. Iwo masikirini ndeerudzi rweTFT asi achishandisa inki yemagetsi inoita kuti mashandisiro akadzika zvakanyanya asi pasina kurasikirwa nesarudzo. Kunyangwe paine pasina mavara skrini (panguva ino) asi iwo ese mune dema uye grey chiyero.
Sechido chekuda kuziva nezve iyi modhi yeiyo LCD skrini, isu tinofanirwa kutaura kuti mutengo uye saizi zvakabatana. Tinogona tsvaga saizi dzakasiyana uye yakakura saizi, iyo inodhura iyo skrini. Nekudaro, 1 kana 2,5 inch E-Ink skrini Ivo vane mutengo we25 euros pachikamu. Mapaneru ehukuru hukuru anogona kusvika chiuru euros pauniti.
Nzira yekubatanidza sei LCD skrini kune Arduino?
Kubatana pakati peLCD skrini neArduino kuri nyore. Muchidimbu isu tinofanirwa kuteedzera mapini ataurwa pamusoro uye kuabatanidza iwo kuArduino bhodhi. Dhizaini yekubatanidza ichave inotevera:
Asi handicho chete chinhu chatinofanira kufunga nezvacho kubatanidza iyo LCD skrini kune Arduino. Chii chimwe isu tinofanirwa kushandisa raibhurari iyo inotibatsira kuti tipe chirongwa icho chatinogadzira chakakodzera kodhi kuti chishande nenzira kwayo nechidzitiro. Chitoro chemabhuku ichi inonzi LiquidCrystal.h uye inogona kuwanikwa mahara kuburikidza iyo yepamutemo Arduino webhusaiti. Raibhurari iyi inofanirwa kushandiswa seyese mamwe maraibhurari, ichichikumbira pakutanga kwekodhi seinotevera:
Iyo yakapusa uye inokurumidza nzira yeiyo Arduino bhodhi kushanda neiyo LCD skrini.
Zvinokurudzirwa here kushandisa LCD skrini yeprojekiti yedu?
Kuenderera mberi nezviri pamusoro, isu tinofanirwa kuzvibvunza isu kana zvichinyatsoita kuva neLCD skrini uye Arduino yeprojekiti yedu pachedu kana chirongwa. Ini pachangu, ndinofunga kuti kune mamwe mapurojekiti anodikanwa uye kune mamwe ese chimwe chinhu chakavanzika pane zvinodikanwa. Semuenzaniso, tinogona kutaura nezvezvazvino mhando dze3D maprinta, mamodheru ayo anongowedzera mune dzimwe nguva iyo LCD inoratidzira uye hapana chimwe chinhu, asi mutengo weiyo modhi unonyanya kudhura.
Muzviitiko izvi, ini handifunge kuti zvakakosha kushandisa LCD kuratidza, asi izvi hazvisizvo mune mamwe mapurojekiti uko iyo LCD inoratidza yakakosha. Mienzaniso yeiyo yekupedzisira mapurojekiti senge mawachi, mutambo weconsoon kana kungoita GPS locator. Zvirongwa izvo inoda kuve ne graphical interface kuti ishande zvinobudirira. Zvatinotaura zvinogona kupusa, kunyanya kune vashandisi vane hunyanzvi, asi chero chinhu chinogona kuita chero chirongwa chinodhura uye kutochiita kuti chisakwanise Nekudaro, zvakakosha kuti uone kana chirongwa chedu chinofanirwa kuve neLCD skrini kana kwete.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » Arduino » LCD skrini uye Arduino